Taariikh Nololeedkii Saxaabada Rasuulka Scw Iyo Qisadii Xiisaha Badneyd Ee Al-Rabiic Binu Ziyaad Al-Xaarithi. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Taariikh Nololeedkii Saxaabada Rasuulka Scw Iyo Qisadii Xiisaha Badneyd Ee Al-Rabiic Binu Ziyaad Al-Xaarithi.
AL-RABIIC BINU ZIYAAD AL-XAARITHI (24)
“MA JIRAAN QOF SIDAADOO KALE RUNTA IIGU SHEEGAY LAGA SOO BILLAABO MARKII LA I DOORTAY” CUMAR BINU KHADAAB.
Wuxuu Cumar Binu Khadaab hadalka u fasaxay wufuuddii, hase ahaatee hadalladoodii ma uusan ka helin hadal naftiisa sidaas u sii saamaysay, wuxuuna markii danbe milicsaday nin uu kheyr ka fishay, ninkii ayuu u baaqay inuu hadlo, wuxuuna ku yiri “bal adigana soo daa waxaad hayso”.
Ninkii wuxuu ku mahadiyay Eebbe (scw), wuuna amaanay, dabadeedna wuxuu yiri:- “adiga amiiral-mu’miniinoow waxaad ogaataa inaanan ummadda madax lagaaga dhigin aan ka ahayn inay tahay imtixaan uu Alle kugu imtixaanayo, ee Alle uga cabso wixii madax lagaaga dhigay, waxaadna ogaataa in haddii hareeraha webiga Furaat ay ku lunto neef ari ah in xaggeeda lagaa weydiin doono maalinta qiyaamaha”.
Markii ay dadkii ka kala dareereen fadhigii uu fadhiyay Amiiral mu’miniinka Cumar Binu Khadaab, ayaa Cumar ku yiri Abuu Musa Al-Ashcari “waxaad noo soo ogaataa arrinka ku saabsan ninkaan, hadday daacad ka tahay hadalkiisaas waxaa hubaal ah inuu kheyr fara badan wato, isla markaasna uu noo noqon karo kaalmo weyn”.
Kama soo wareegan waqtigaas wax yar, jeer maalintii danbe uu Abuu Muusaa Al-Ashcariy ka diyaariyay ciidankii furanayay magaallada “MANAADIR” kana tirsan gobolka Al-Ahwaz, isagoo markaas fulinayay amarkii uu siiyay khaliifka muslimiinta ee Cumar Binu Khadaab. Wuxuu Abuu Muusa ku daray ciidankii muslimiinta Al-Rabiic Binu Ziyaad iyo walaalkiis Haajir Binu Ziyaad.
Abuu Muusa Al-Ashcariyi ayaa istaagay isagoo u dhawaaqaya ciidanka, wuxuuna ku yiri: “muslimiinoow waxaan goostay oo go’aansaday in qof kasta oo sooman uu afuro, ama uu isaga haro dagaalka”, wuxuuna soo qaatay ibriiq/kirli biyo ku jiray, sidiina ayuu biyihii ku cabbay, si dadkana ay u raacaan oo ay iyagana afuraan, maadaama uu yahay amiirkooda ay waajib tahay inay hadalkiisa aqbalaan.
Markii uu Muhaajir maqlay hadalkii uu yiri Abuu Muusa ayaa wuxuu biyihii kabaday hal jeer, wuxuuna yiri “ wallaahi uma cabbin oon i hayay dartii, hase ahaatee waxaan meel marinayay dhaartii uu dhaartay amiirkayga”. Waana tarbiyad ay ka barteen macalinkoodii weynaa ee Rasuulka (scw), oo wuxuu xaddiis macnihiisa ahaa ku yiri isagoo arrintan ka hadlayaya “qofkii aqbala amiirkayga waa qof i adeecay”.
Intaa kadib, wuxuu Muhaajir seeftiisa kala soo baxay galkeedii, sidiina ayuu ku galay dagaalkii. Wuxuu seeftiisii ku kala beeray safafkii dagaalka, wuxuuna billaabay inuu si geesinimo leh oo aan cabsi ku jirin uu dhulka u dhigo gaalladii uu la dagaalamayay.
Inkastoo uu Muhaajir muujiyay wacdarradaas weyn, haddana waxaa markii danbe korkiisa dhinac weliba ka haleeshay seefihii iyo warmihii ay soo tuurayeen gaallada, ilaa markii danbe uu dhulka ku dhaco isagoo dangiigan oo meyd ah. Dhinaca kale, waxay gaalladii si aan naxariis lahayn u soo goosteen madaxii Muhaajir, waxayna ka soo laa-laadiyeen meel sare oo goobta dagaalka ka mid ahayd.
Al-Rabiic Binu Ziyaad ayaa eegay walaalkiis Muhaajir oo madaxiisa ka soo laalaada meel sare, markaasuu si ay sugnaansho iimaaneed ku jirto u yiri “alla ayaan badnidaa, waxaana kuu sugnaatay meel loo dheelmado meeshii ugu wanaagsanayd”, wuxuuna ula jeeday Jannada. Dhinaca kale, wuxuu Al-Rabiic ballan ku galay inuu u aargudi doono walaalkiis, wuxuuna yiri “wallaahi ayaan ku dhaaranayaa inaan kuu aargudi doono adiga iyo muslimiinta la laayay-ba inshaalah”.
Markii uu arkay Abuu Muusaa Al-Ashcariyi sida uu Al-Rabiic uga walbahaaray geerida sida saxariirta leh ugu timid walaalkiis, ayaa waxaa la qumanaatay inuu hoggaaminta ciidanka uu uga tanaasulo Al-Rabiic, sidii ayuuna Rabiic ula wareegay hoggaaminta ciidanka, waxayna aadeen magaallada Suus si ay u furtaan. Ciidamadii muslimiinta ee uu hoggaaminayay Al-Rabiic ayaa sidii hufadii oo kale hal mar u galeen goobihii ay degganaayeen gaallada.
Dagaal ba’an oo dhex maray ciidamadii muslimiinta iyo gaallada kadib, wuxuu Eebbe (sw) sabab uga dhigay Al-Rabiic Binu Ziyaad inuu furto magaalladii la oran jiray Manaadir. Waxay muslimiintii laayeen dagaalyahaniintii gaallada ahaa, waxayna soo qafaasheen ubadkoodii, iyagoo hantidoodiina intuu Alle doonay qaniimaystay (qaniimada waa hantida laga soo helo jihaadka).
Sidoo kale, waxaa kaloo dadkii la qafaashay ku jiray addoon u shaqayn jiray guddoomiyaha degmada, wuxuuna haystay markaas lacag gaaraysa 300 000 oo dirham, (lacag aad iyo aad u fara badan) si uu u siiyo sayidkiisa. Al-Rabiic ayaa ku yiri ninkii “inteed ka keentay lacagtan faraha badan?!”. Wuxuu yiri “waxay ka timid mid ka mid ah tuulooyinka uu xukumo sayidkayga”.
Al-Rabiic ayaa ku yiri “ma tuullo kasta waxay bixisaa lacagtaan oo kale sannad kasta”. Wuxuu yiri “haa”. Al-Rabiic ayaa yiri “siday ku dhacday?!”. Wuxuu yiri “lacagtaan waxaan ka soo saarnaa faasasyadeena iyo dhididkeena” oo uu ula jeeday lacagtaas waa waxaan soo shaqaysanay oo aan ku soo tacabnay.
Markii uu qaboobay dagaalkii, ayaa waxaa Al-Rabiic Binu Ziyaad oo ahaa hoggaamiyaha ciidanka u yimid guddoomiyihii degmada, isagoo doonaya inuu bixiyo lacag furasho ah. Al-Rabiic ayaa ku yiri “waan ku sii deenayaa haddaad muslimiinta u badiso lacagta furashada”.
Guddoomiyihii degmada “imisaad doonaysaa?”.Al-Rabiic Binu Ziyaad “waxaan dhulka ku qotominayaa warankan, dabadeedna waxaad korkiisa ku shubaysaa dahabka kiisa huruudka ah iyo fiddada ama qalinka ilaa aad ka qariso qarin”. Guddoomiyhii degmada wuxuu yiri “waan oggolahay”, wuxuuna kaasafoortadiisa ka soo saaray dahabkii kala duwanaa, isagoo warankii dhulka lagu qotomiyay korkiisa ku shubay jeer dahabkii ay qariyaan waranka.
Waxyar kadib maba la joogin, jeer ciidamadii gaallada ay u diyaar garoobaan inay dagaal ku qaadaan ciidamada muslimiinta, waxayna isaga yeerteen meel kasta, si ay u difaacdaan magaalladoodii istiraatiijiga ahayd, arrintaasina wax kasta ha ku qaadatee. Labadii ciidan waxaa dhex martay dagaal si ba’an labada dhinac loogu hoobtay, iyadoo labada ciidanba ay ka dhinteen dad aad u badan.
Al-Rabiic Binu Ziyaad wuxuu ahaa nin aad u dheer, lehna midab maariin, aadna u xoog badan. Cabsi ayaa lagu tuurayay qofkii arka Al-Rabiic. Barweez markii uu u soo galay Al-Rabiic waxaa durbadiiba gashay cabsi aad u weyn, cabsi awgeed ayuu ku sigtay inay nafta uga baxdo, kadib markii uu arkay meydadkii dadkiisii laga laayay ee lagu daadiyay waddada.
Ma uusan ku dhiiran Barweez inuu u soo dhowaado Al-Rabiic si uu u salaamo. Wuxuu ka cabsaday in la dilo, hadal gango leh oo laga dareemayo cabsi daran ayuu kula hadlay Al-Rabiic, isagoo ballan kula galay inuu u soo saaro 1000 wiil oo dhalinyaro ah, uuna mid kastaana madaxiisa saaro koob dahab ah, sidiina ayuu Al-Rabiic Binu Ziyaad uga aqbalay dalabkii ka yimid Barweez.
Hase ahaatee, Al-Rabiic Binu Ziyaad kuma qalbi fiyoobeen madaxnimadaas, oo wuxuu jeclaa inuusan madax noqon, weliba wuxuu sii dhibsaday markii uu warqad ka helay ninka la yiraahdo Ziyaad Binu Abiih oo ka mid ahaa madaxdii waaweynaa ee reer Banii Ummaya, dhinaca kalena ka mid ahaa raggii dilay Xuseen Binu Cali wiilkii uu awoowga u ahaa Rasuulka (scw).
Warqaddii loo soo diray Al-Rabiic, ayaa waxaa ku qornaa hadalladan “amiiral mu’miniinka Mucaawiye wuxuu ku amrayaa inaad dahabka kiisa huruudka ah iyo kiisa cad (qalinka) kana mid ah qaniimooyinka jihaadka aad u dhigtid bankiga dhexe ee muslimiinta, wixii intaas ka soo harana aad u qaybisid mujaahidiinta”, taasina waa mid si toos uga hor imaanaysa qodobbada ku cad nusuusta qur’aanka.
Waxaan ognahay inuu Eebbe (sw) qaybiyay sida loo kala qaadanayo hantida laga soo helo jihaadka, iyadoo shan qaybood qayb la dhigayo baytul-maalka, halka inta soo hartayna loo qaybinayo mujaahidiinta, iyadoo uu qaybinayana amiirka jihaadka.
Al-Rabiic Binu Ziyaad Al-Xaarithi dalabkaas si daran ayuu ugu gacan sayray, wuxuuna warqad uu ugu jawaabayo Ziyaad Binu Abiih ku yiri “waxaan kitaabka Alle ka helay amar ka duwan kii aad igu soo amartay magaca amiiral-mu’miniinka”, dabadeedna dadkii ayuu isugu yeeray isagoo u dhawaaqayana wuxuu ku yiri “ku soo kallaha qaniimooyinkiinii oo kaalaya qaata”, wuxuuna maalkii qaniimada shan meelood meel u diray bankiga dhexe ee muslimiinta ee Dimishiq.
Maalintii jumcada ee xigtay markay timid, wuxuu Al-Rabiic Binu Ziyaad u soo baxay salaaddii jumcada isagoo xiran dhar cadcad. Dadkii ayuu u jeediyay khudbaddii jumcada, dabadeedna wuxuu yiri “dadoow waan ka noogay noloshan ee waan duceenayaaye ee aamiin ii dhaha ducadayda” kadibna wuxuu ku duceystay “Ilaahayow haddaad kheyr ila doonaysid xaggaaga ii qibloow oo i oofso si degdeg ah oo aan dib dhigid lahayn”, dadkiina ducadiisa ayeey aamiin u yiraahdeen.
Maalintaas qoraxdeeda ma dhicin jeer uu ka dhinto saxaabigii geesigii ahaa ee dunidan dhow ka doortay la kulankii Eebbe (sw). Ilaahay ha ka raalli noqdo, hana u naxariisto saxaabigii jaliilka ahaa ee Al-Rabiic Binu Ziyaad Al-Xaarithi.
Fadlan Share Dheh Oo Kheyrka Sii Gaarsii Walalaha Kale
Casharkii 24aad Ee Kitaabka Siirada Nabi Muxamed Scw Iyo Dheelmintii Rasuulka Scw Israa-Wal-Micraaf..
Qiso Aad Iyo Aad Cajiib U Ah “Jannada Ayuu Galay Asagoo Weligiis Hal Mar Qura Sujuudin”..!!